Acryli Ibé akwụkwọ Manufacturers & Suppliers - China Acryli Sheets Factory
Acryli dị na ihe karịrị naanị doro anya! Acha acrylic na-acha agba na-eme ka ìhè gabiga na tint mana enweghị mgbasa. Enwere ike ịhụ ihe n'ụzọ doro anya n'akụkụ nke ọzọ dị ka windo nwere agba. Ọ dị mma maka ọtụtụ ọrụ okike. Dị ka acrylics niile, mpempe akwụkwọ a ga-adị mfe ịkpụ, guzobe ma mepụta ya. Dhua na-enye ọtụtụ akwụkwọ agba agba nke nwere agba Plexiglass Acrylic.
• A na-enweta ya na-acha ọbara ọbara, oroma, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, aja aja, acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ, odo odo, ojii, ọcha na ụdịdị dị iche iche
• Cut-to-size customization, ọkpụrụkpụ nhọrọ dị
Ihe mgbochi Dhua dị mma plexiglass bụ ụzọ dị mma iji kpuchido ndị ọrụ gị na ndị ahịa gị site na nje bacteria na nje na-agbasa site na sneezing ma ọ bụ ụkwara. Ogwe ndị a na-apụta n'akụkụ niile - n'ọfịs ọfịs, na ndenye ọpụpụ n'ụlọ ahịa na ụlọ nri, na ụlọ ọrụ ndị dọkịta - ebe ndị mmadụ na-emekọrịta ihu na ihu.
• Nnọọ isiike & anụ
• Omenala nha, aghụghọ na ndịna-emeputa dị